Awood Ma U Leeyahay? Waatan Shuruuda Adag Ee Quique Setien Loo Sheegay Inuu Buuxiyo Si Aan Barcelona Looga Caydhin - Gool24.Net
Awood Ma U Leeyahay? Waatan Shuruuda Adag Ee Quique Setien Loo Sheegay Inuu Buuxiyo Si Aan Barcelona Looga Caydhin
July 30, 2020 Apdihakem Omer Adam
Macalinka kooxda Barcelona ee Quique Setien ayaa lagu soo warramayaa in loo sheegay sababta kaliya ee uu baaqiga ugu sii ahaan karo jagada tababarenimo ee kooxdaas xilli ciyaareedka dambe.
Wargeyska Sport ayaa sheegay in Setien uu ogsoon yahay inuu joogo boos uu shaqadiisa ku waayi karo kaddib markii ay horyaalka La Liga u waayeen kooxda Real Madrid oo shan dhibcood oo saafi ah kaga gacan sarreysay.
Tababarahan 61 sano jirka ah ayaa si weyn loogu eedeeyay guuldarradii 2-1 ka ahayd ee kasoo gaadhay kooxda yar ee Osasuna oo casaan qabtay 10 ciyaartoyna ku ciyaaraysay taas oo u fudaydisay in Real Madrid ay hanato horyaalkii ugu horreeyay tan iyo 2017.
Setien ayaa shaqada tababarenimo ee Barcelona ka bedelay Ernesto Valverde bishii January kaddib qaab aan lagu qancin oo ay horyaalka ku bilawdeen balse imaatinkiisa ayaan noqon mid qanciyay xiddigaha kooxda.
Barcelona ayaa tartanka Copa Del Rey kaga hadhay gacmaha kooxda Athletic Bilbao oo 1-0 kaga reebtay iyagoo intaas kaddib lumiyay hoggaanka La Liga oo ay hayeen mudadii go’doonka xanuunka Korona lagu jiray.
Haddaba, sida uu hadda sheegayo wargeyska Sport, qaabka kaliya ee uu Setien kusii haysan karo shaqadiisa Barcelona ayaa ah inuu kooxdaas ku guuleeyo UEFA Champions League oo ay hayaankiisa bisha August bilaabayso.
Barcelona ayaa kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League la ciyaaraysa Napoli 8-da bisha August, siddeed bilood kaddib bar-bardhacii 1-1 ka ahaa ee ay lugtii hore soo galeen.